Ụdara M Chaa – hoo!haa!!
O ruru otu ụbọchị. Otu nwanyị lọtara ahịa. Ya ewepụta ihe ekeleahịa ọ zụtara. Ihe ekele ahịa o wepụtara mgbe ọ lọtara ahịa bụ ụdara. Ya ekee ụdara ọ zụtara kenyechee ụmụ ya dum, ma o kenyeghị nwantakịrị nne ya nwụrụ anwụ ya na ya bi. nanị ụmụ ya ka o kenyere ụdara. Mgbe ha nile rachara ụdara ha ghasasịa mkpụrụ ụdara ebe nile. Nwanyị ahụ a sị nwantakịrị ahụ ya gaa chịkọrọ mkpụrụ ụdara wụsara aghara aghara gaa wụfue n’ebe a na-ekpofu ahịhịa. Nwatakịrị ahụ achịkọta mkpụrụ ụdara ndị ọzọ rachara gaa dowe n’otu ebe dị nso ebe a an-ekpofu ahịhịa. Ya e rue na-nderi abalị mgbe ọnwa na-eti, nwatakịrị ahụ achịrị mkpụrụ ụdara ndị ahụ ndị ọzọ rachara, chịịrị ha gaa n’akụkụ ọhịa dị n’ebe e liri nne ya. Mgbe o ruru ebe ahụ ya akụọ mkpụrụ ụdara asaa n’akụkụ ili nne ya. Nwatakịrịrị ahụ ebido gụba egwu akwa arịrị. Anyammiri ebibo na-agba ka ide; na-agba ụdara ahụ nwa na-enweghị nne kụrụ mmiri. Ka nwatakịrị ahụ na-agụ egwu; ya a na-arịọ arịrịọ ka ụdara ya pue; na-asi:( Unu ga-n’ekwe “Nda”)
Ụdara m pue Nda
Pue, pue, pue Nda
Nwunye nna m, Nda
Zụtara ụdara n’ahịa Nda
Rachaa, racha rachaa Nda
Rachaa jụ nwa enwe nne Nda
Rachaa jụ nwa enwe nna Nda
Eluwa ụwa bụ ọlịlị Nda
Onye nọchaa ọ naba Nda
Ka nwatakịrị ahụ na-ebe akwa anyammiriakwa ya a na-awụsa n’ala ebe ahụ ọ kụrụ ụdara. Ngwangwa, ngwangwa ụdara ebido puwe. Mgbe nwantakịrị ahụ hụrụ na ụdara ya epuwole, ya ebidokwe na-arịọ ka ụdara ya too; gụbakwa egwu na-asi:
Ụdara m too Nda
Too, too, too Nda
Ụdara ebido towe; towe, towe, towe. Apaka ya agbasasịa; saa mbara. Ya ebido gụba egwu na-arịọ ụdara ahụ ka ọ mịa. Ya a na-agụ egwu na-asị:
Ụdara m mịa Nda
Mịa, mịa, mịa Nda
Ụdara ahu ebido miwa. Ngwangwa, ngwangwa nwatakịrị ahụ na-enweghị nne a sị ụdara ya kaa. Ya a na-agukwa egwu na-asị:
Ụdara m khaa Nda
Kaa, kaa, kaa Nda
Kaara nwa enwe nne Nda
Kaara nwa enwe nna Nda
Ụdara m kaa Nda
Ngwangwa, ngwangwa ụdara nwantakiri ahu na-enweghi nna na nna a kaa. Ya a aguwa egwu na-asị:
Ụdara m chaa Nda
Chaa, chaa, chaa Nda
Chaara nwa enwe nne Nda
Chaara nwa enwe nna Nda
Ụdara acha, chaa, chatọọ. Ngwangwa, ngwangwa nwatakịrị ahụ na-enweghị nne asị ụdara ya daa. Ya a na-agu egwu na-asị:
Ụdara m daa Nda
Daa, daa, daa Nda
Dapụrụ nwa enwe nne Nda
Dapụrụ nwa enwe nna Nda
Ihe ọzọ ọ hụziri bụ ka ụdara na-ada kìrìtìm kìrìtìm kìrìtìm kìrìtìm n’ala. Ụdara aghasara ebe dum. Ebe nile a bụrụ ụdara ụdara. Nwantakịrị anọdụ ebe ahụ rajuo ụdara afọ. Mgbe ọ làwàrà, ya achịrị ụdara ụfọdụ. Chịrị ụdara chịrị ga rue ụlọ nye ụmụ nwanyị ahụ jụrụ inye ya ụdara ekeleahịa. Ha nile arachaa ụdara, ụdara afọkwa. Ha e keele ya, chịrịzie ụdara fọdụkwara ga-nye nne ha.
Nne ụmụtakịrị ahụ a jụọ ha ebe ha si wete ụdara nke ahụ tọgburu onwe ya. Ha asị ya na ọ bụ nwanne ha, nke ahụ ọ jụrụ inye ụdara ekeleahịa. Nwanyị ahụ na ụmụ ya esoro ga jụọ nwatakịrị ahụ na-enweghị nne na nna ebe o si wete ụdara. Nwatakiri ahụ e duru ha gaa n’akụkụ ili nne ya n’ebe ahụ ụdara ya puru, too, mịa, chaa, daa.
Mgbe ha na-aga ya a na-agụ egwu na-asi
Ọ’ụ gịnị chatọrọ n’elu? Yege yege
Ụdara asaa Yege yege
Ụdara asaa, Yege yege
Na ụtụ asatọ Yege yege
Ụdara asaa Yege yege.
Previous Post: Ndi ohi agbagbuola nwata akwụkwọ ji nzere mmụta ogo nke mbụ pụta na Lafịya
Next Post: Nwa nkea, abụ ọrụ ebube ka ọ bụ ọrụ fada?
Nkea amaka ooo